I-World Steel Association: izibikezelo zensimbi yomhlaba ekhula ngo-5.8% ngo-2021 - China Foshan Hermes Steel
I-CNC Laser Cutting
Mirror Engagqwali Ishidi
Brushed engagqwali Ishidi
Hairline Engagqwali Ishidi
WESI-4 Engagqwali Ishidi
Vibration Engagqwali Ishidi
Ishidi Lensimbi Engagqwali Ewela Izinwele
Ishidi Lensimbi Engagqwali Ye-PVD
Kwagxila Engagqwali Ishidi
Embossed Engagqwali Ishidi
Ishicilelwe Engagqwali Ishidi
Ishidi Le-Bead Elikhishwe Ngensimbi Engagqwali
Laminated Engagqwali Ishidi
Ishidi Lensimbi Eliphikisana Neminwe
Iphaneli Yomnyango Engagqwali
Iphaneli Yensimbi Engagqwali
Engagqwali Elevator Ceiling
Engagqwali ikheshi Handrails
Perforated Engagqwali Ishidi
KaMose Engagqwali Ishidi
Ishidi le-3D Laser Engagqwali
I-World Steel Association: ibikezela ukuthi isidingo sensimbi emhlabeni wonke sikhule ngo-5.8% ngo-2021
I-China-Singapore Jingwei Client, Ephreli 15. Ngokwe-website esemthethweni yeWorld Steel Association, iWorld Steel Association ikhiphe inguqulo yakamuva yombiko wesibikezelo sokufunwa kwensimbi wesikhashana (2021-2022) ngomhlaka 15. Umbiko ukhombisa ukuthi ukufunwa kwensimbi emhlabeni kuzokwehla ngo-2020 Ngemuva kuka-0.2%, kuzokhuphuka ngo-5.8% ngo-2021, kufinyelele kumathani ayizigidigidi eziyi-1.874. Ku-2022, ukufunwa kwensimbi yomhlaba kuzoqhubeka nokukhula ngo-2.7%, kufinyelela kumathani ayizigidi eziyizinkulungwane eziyi-1.925.
Umbiko ukholelwa ukuthi igagasi lesibili noma lesithathu lo bhubhane eliqhubekayo lizoba ngcono kwikota yesibili yalo nyaka. Ngenqubekela phambili engaguquki yokugoma, imisebenzi yezomnotho emazweni amakhulu adla insimbi kancane kancane izobuyela kokujwayelekile.
U-Al Remeithi, onguSihlalo weWorld Steel Association's Market Research Committee, uphawule ngemiphumela yalesi sibikezelo: “Yize ubhadane olusha lomqhele i-pneumonia lulethe imiphumela emibi ezimpilweni nasezimpilweni zabantu, imboni yensimbi yomhlaba isenenhlanhla. Ekupheleni konyaka we-2020 ukufunwa kwensimbi yomhlaba sekutheleke kancane kuphela. Lokhu kubangelwa ukuvuselelwa okunamandla okumangazayo kweChina, okuholele ekutheni insimbi yaseChina ikhule ngo-9.1%, kanti kwamanye amazwe emhlabeni, ukufunwa kwensimbi kwehle ngo-10.0%. Eminyakeni embalwa ezayo, umnotho othuthukile Isidingo sensimbi emnothweni osathuthuka sizolulama kancane. Izici ezisekelayo ukucelwa kwensimbi okucindezelwe kanye nohlelo lukahulumeni lokuvuselela umnotho. Kodwa-ke, kweminye yeminotho ethuthuke kakhulu, kufanele ibuyele ezingeni ngaphambi kobhadane. Kuzothatha iminyaka eminingana.
Ekhuluma ngomkhakha wezokwakha embonini yensimbi, lo mbiko uthe ngenxa yalolu bhubhane, kuzovela izitayela ezahlukahlukene zentuthuko emikhakheni eyehlukene yomkhakha wezokwakha. Ngokwanda kwezokuxhumana ngocingo kanye ne-e-commerce, kanye nokwehla kohambo lwezebhizinisi, ukufunwa kwabantu ngamabhilidi ezentengiselwano nezindawo zokuvakasha kuzoqhubeka ukwehla. Ngasikhathi sinye, isidingo sabantu sezinsiza ze-e-commerce sikhulile, futhi lesi sidingo sizokhula sibe umkhakha okhulayo. Ukubaluleka kwamaphrojekthi wengqalasizinda sekukhuphukile, futhi kwesinye isikhathi kube yiyona ndlela kuphela emazweni amaningi yokuvuselela umnotho wawo. Emnothweni osafufusa, amaphrojekthi wengqalasizinda azoqhubeka nokuba yisisekelo esinamandla sokushayela. Emnothweni othuthukile, amaphrojekthi wecebo lokutakula okuluhlaza kanye namaphrojekthi wokuvuselela ingqalasizinda azofaka isidingo somkhakha wezokwakha. Kulinganiselwa ukuthi ngo-2022, imboni yokwakha yomhlaba izobuyela ezingeni lika-2019.
Umbiko uphinde wathi emhlabeni wonke, embonini yensimbi, imboni yezimoto ibhekane nokwehla okuphawuleka kakhulu, futhi kulindeleke ukuthi imboni yezimoto ithole ukuvuseleleka okuqinile ngonyaka ka-2021. Imboni yezimoto yomhlaba kulindeleke ukuba ibuyele ku Izinga lowe-2019 ngonyaka ka-2022. Yize imboni yemishini yomhlaba ishayeke kakhulu ngenxa yokwehla kotshalomali ngo-2020, ukwehla kwehle kakhulu kunaku-2009. Imboni yemishini kulindeleke ukuthi ilulame ngokushesha. Ngaphezu kwalokho, kunesinye futhi isici esibalulekile esizophinde sithinte imboni yemishini, okungukuthi, ukusheshisa kokufakwa kwedijithali kanye nokuzenzekelayo. Ukutshalwa kwemali kule ndawo kuzothuthukisa ukukhula komkhakha wemishini. Ngaphezu kwalokho, amaphrojekthi aluhlaza kanye nezinhlelo zokutshala imali emkhakheni wamandla avuselelekayo nazo zizoba enye indawo yokukhula embonini yemishini. (Umthombo: Sino-Singapore Jingwei)
Ipuleti lensimbi engagqwali Ishidi Lensimbi Engagqwali
Isikhathi Iposi: Apr-16-2021
UFoshan Hermdeco Steel Co., Ltd
Faka: 21 / F, Block 1, Jinchang International Metal Trading Market, Chencun, Shunde, Foshan, Guangdong, China
Ifoni: + 86-757-29273045
Ucingo: + 86-757-29273047
Ifeksi: + 86-757-29273033
UWhatsapp: 0086 13516572815